မုံရွာမြို့တွင် နှစ် ၂ဝ ကျော်ကြာ အသုံးမပြုတော့သော သုသာန်ဟောင်းနှစ်ခုကို လူထု အပန်းဖြေစခန်?? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ မေ ၁၈
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာ မြို့တွင် နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ကြာ အသုံးမပြုတော့သော သုသာန် ဟောင်းနှစ်ခုအား လူထုအပန်းဖြေ ဥယျာဉ်နှင့် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာအ ဖြစ် ဖော်ဆောင်နေကြောင်း တိုင်း ဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအ ဖွဲ့ထံမှသိရသည်။ ယင်းသုသာန်ဟောင်းနှစ်ခုမှာ မုံရွာမြို့မြောက်ဘက် အောင်ချမ်း သာရပ်ကွက်နှင့် ကွေ့ကြီးရပ်ကွက်တို့ရှိအမှတ်(၁)လမ်းနှင့် ပင်စင် လမ်းတို့တွင်တည်ရှိပြီး သုသာန် နှစ်ခုပေါင်းမှာ ငါးဧကခန့်ကျယ် ဝန်းသည်။
”အခု ခြံခတ်တာတို့၊ အုတ်ဂူတွေ ဖြိုတာတို့လုပ်နေတယ်။ မူလ ဧရိယာလောက်ကို သုသာန်က မကျယ်တော့ဘူး။ လူတွေနေထိုင် လာတာရောကြောင့်ပါ။ ပန်းခြံက တော့အခမဲ့၊ လူထုပန်းခြံပါ။ အခုဘတ်ဂျက်ကနေစပြီး အကောင် အထည်ဖော်နေတာ”ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းစည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့ညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးသစ်ထူးမြင့်ကမေ ၁၇ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
မုံရွာမြို့တွင် လူထုအပန်းဖြေ ဥယျာဉ်များ ပျောက်ကွယ်နေသည် မှာ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းကတည်းက ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ပြည် ထောင်စုလမ်းကြားရှိ ကန်သာယာကန်ကိုသာ လူထုအပန်းဖြေဥယျာဉ် အဖြစ်အသုံးပြုနေပြီး တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်မှုအားနည်းနေကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။ အပန်းဖြေဥယျာဉ်နှင့် ဧရိ ယာအတွက်တည်ဆောက်မည့် ဒီ ဇိုင်းပုံများကို ရေးဆွဲနေဆဲသာဖြစ် ပြီး အပြီးသတ်ပုံစံမရသေးကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် မကြာခဏ မီးလောင်မှုနှင့် မီးလန့်မှုများ ဖြစ်ပွားလာခြင်းကြောင့် ခေတ်မီ မီးသတ်
ရေတွင်ပါသည့် အနယ်နှင့် ပိုးမွှားများကို ရွေ့လျားရေသန့်စင် ကားဖြင့် စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်၍ လိုအပ
ရန်ကုန် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများဖြေရှင်းရန် JICA ချေးငွေဖြင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲနေ၊ အေဒီလမ်းဆုံ?
ကော်တွိုက်စ်ကို အသုံးမပြုသေးခြင်းကို နည်းပြ လိုပီတီဂွီ ရှင်းလင်း၊ လူစားလဲခံရခြင်းအတွက် အံ